Firehetana goavana :: Lehilahy lehibe maty kila tao an-trano • AoRaha
Namoizana ain’olona ny hain-trano goavana niseho, teny Ambalavao Isotry, afak’omaly alina. Kila forehitra ny lehilahy iray, dimy amby fitopolo taona. Mpamonjy voina roa kosa no tojo fahasemporana sy naratra, nandritra ny famonoana ny afo.
Tombanana ho an’hetsiny maro ny sandan’ny entana simba. Tsy niitatra tamin’ny trano hafa kosa ny fahamaizana. Tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany alina no nitrangan’ny hain-trano, tamin’io sabotsy io. Trano lehibe iray misy rihana roa, ahitana efitra roa ambin’ny folo no nirehitra. Vinavinaina ho avy amin’ny fifampikasohan’ny herinaratra no nahatonga ny firehetana tao amin’ny rihana ambany indrindra, izay misy efitra fitahirizana lamba tonta (fripy) marobe.
Haingana ny fiitaran’ny afo tany amin’ny efitra hafa tany ambony rihana. Kamiao efatra famonoana afo niaraka tamin’ny vatan-dehilahy valo ambin’ny folo, avy amin’ny sampana mpamonjy voina no tonga teny an-toerana tamin’ny fanavotana an’ireo niharamboina.
Lehilahy tsy salama
“Afaka nanavotra aina ny olona rehetra tao amin’ilay trano, ankoatra ny lehilahy lehibe iray nipetraka tany ambony rihana. Voalaza fa tsy afamihetsika izy noho ny tsy fahasalamana vokatry ny aretin’ny tosi-dra. Main’ny afo tao izy. Rava ny gorodona ka nianjera tany ambany rihana ny vatana mangatsiakany”, araka tatitra avy amin’ny mpitandro filaminana tonga teny an-toerana.
Sempotry ny setroka, nandritra ny famonoana ny afo, ny iray tamin’ireo mpamonjy voina. Iray kosa naratra nianjeran’ny hazo sy zavatra hafa. Nentina haingana tany amin’ny hopitaly izy roa lahy ireo. Tokony ho tamin’ny roa ora maraina vao voafehy tanteraka ny afo. Simba sy lasa lavenona ny entana rehetra tao amin’ny efitra valo tao amin’ity trano lehibe.
Vono olona tany Tsiroanomandidy Handefasana fiantsoana ireo miaramila enina voarohirohy
Fanafihana mitam-piadiana Vehivavy lehibe maty voatifitra
Fahafatesana mampiahiahy :: Mpitondra môtô hita faty teo amin’ny arabe
Vono olona tany Andapa :: Lehilahy navarina tany anaty rano